DAAWO:- Odayaal taageersan Axmed Madoobe oo ku hanjabay in ay qoriga qaadan doonaan lana dagaalami doonaan DFS. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Odayaal taageersan Axmed Madoobe oo ku hanjabay in ay qoriga qaadan doonaan lana dagaalami doonaan DFS.
Odayaasha dhaqanka Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhalleecayn xooggan u soo jeediyey Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen in ay dalka dib ugu celinayso maalmihii mugdiga ahaa ee dagaalka sokeeye isla markaana ay burburinayso hannaanka dowladeed ee ay ummada Soomaaliyeed isla ogolaatay beesha caalamkuna aqoonsatay ee Federaalka.
Afhayeenka Issimmada Jubbaland Ugaas Cumar Xiireey oo ka hadlay shir jaraa’id oo ay Oday dhaqameedyada Jubbaland ku qabteen magaalada Kismaayo ayaa sheegay in colaadda ay madaxda Xukuumaddu ka oogayaan deegaanno nabdoon oo ay kamid yihiin Baladxaawo iyo Dhuusamareeb oo ka sii horaysay ay shacabka Soomaaliyeed xusuusinayso Xukuumaddii Milatariga hore ee diktaatoorinimada iyo maquuninta isku dayday in ay dalka ku maamusho kuna fashilantay isku daygaa Xukuumadda haatan talada dalka haysana ay isku daygan ku fashilmi doonto.
Ugaaska ayaa sidoo kale sheegay in ciidammada uu dalku haysto loo baahan yahay in dalka lagaga xoreeyo argagixisada Al Shabaab, aysanna ahayn in lagu laayo wiilal Soomaaliyeed laguna burburiyo hannaan dowladeed oo dhisan.
Beesha caalamka ayuu Ugaasku ugu baaqay in ay doorkeeda ka ciyaarto ilaalinta hannaankii la isku waafaqay isla markaana hakiso maal galinta iyo taageerada ay u fidinayso ciidammada ajendaha siyaasadeed loo adeegsanayo.
“Waxaa la yaab leh in qaybo badan oo dalka kamid ah oo ay u horayso caasimadda dalka ay shacabka Soomaaliyeed amni darro iyo cabsi ugu noolaan la’yihiin ciidankii difaaci lahaa oo dalka cadawga ka xorayn lahaana ay madaxda dalka ku mashquulinayaan in ay ciidamo Soomaaliyeed oo ay shalay iska garab dagaalamayeen dagaalka Al Shabaab ka dhan ahna ku wada jireen xabbad ku ridaan oo la dagaalamaan. Arrinkan ma aha mid aan sinaba ku aqbali karno hadaan nahay waxgaradka ummadan,” ayuu yidhi ugaa Cumar Xiireey.
“Ciidanka dowladeed waxaa loo dhisaa in dalka lagu difaaco laguna xasiliyo ee looma dhiso in hannaan dowladeed oo dhisan lagu burburiyo, rabitaanka shacabka madaxda Dowladda Federaalka lagu muquuniyo iyo in wiilal Soomaaliyeed lagu laayo toona,” ayuu ugaasku hadalkiisa sii raaciyay.
Maamulka Villa Somalia ayaa u muuqda mid isku day walba u samaynaya sharci walbana uga talaabsanaya iyaga oo uga dan leh in ay meesha ka saaraan cid walba oo ka ra’yi duwan inta aan la gaadhin doorashada madaxtinimo ee xigta si ay xukunka ugu sii nagaadaan oo loo waayo cid la tartami karta.
Dambiyada ay madaxda talada dalka hay aka galeen shacabka Soomaaliyeed oo ah kuwo wiiqaya aaminaadda ay shacabku ku qabaan hanaanka dawladnimo ayaa isugu jira in la weeraro guryaha siyaasiyiin mucaarad ah, in afraad Soomaaliyeed loo gacan galiyo dawlado shisheeye, musuq baahsan iyo fara galinta doorashooyinka dawlad goboleedyada xubnaha ka ah xukuumadda federaalka dalka.
Salaadiinta dhaqanka Jubbaland
Daawo Odayaasha dhaqanka Jubbaland iyo qaybaha bulshada oo ka hadlay dhiibaatada iyo colaadda ay Dowladda Federaalku ka waddo gobolka Gedo.
Posted by Jubbaland TV on Monday, March 2, 2020
Previous articleAKHRISO:- Xisbiyada Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh oo laga kala yaacayo “Maxaa kusoo kordhay?”.
Next articleDAAWO:- Wasiirka arimaha Gudaha Somaliland oo looga shaki qabo inuu ka dambeeyay qaraxii ka dhacay Laascaanood
Taajka Maakhir March 4, 2020 At 1:32 am
Guusha straatijiga ahayd ee uu Farmaajo maanta ku dakeyn lahaa waxay ahayd isaga oo dastuurka dhammeystira oo deeto uu maamullada qabyada ah iyana sida ugu habban iskugu dubbarido. Ka dib waxay ahayd in uu maamullada ugu tun iyo tan weyn ee Puntland iyo Jubbaland ka dhigto labada garab ee uu dowladdiisa iyo qarannimada curatay ku duulinayo.
Maadama uu dalku weli qarka u saaran yahay isla halista uu ka soo kabanayo oo ay abeesadii labada madax ee SNM iyo HAG lahayd weli qaarka hore ka nooshahay waxaa Farmaajo si xun uga hoostay in uu sha’niga tolkiisa soke ee Puntland iyo Jubbaland mideeyo oo in ay qummaati u la shaqeeyaan kalsoonideeda iyo taageeradeeda buuxa ka hantiyo.
Waxay ahayd in uu ka billaabo Sool, Sanaag iyo Cayn oo uu inta saxarka ka saaro Puntlandtooda ku qanciyo oo deeqo horumarineed na ku gallado isaga oo qaddiyadda u muqaddaska ah ku wada xakameynaya. Marka uu intaa ku guuleysto ayaa waxay isu soo hadhi lahaayeen oo uu dhagrahooda iyo munaafaqaddooda caalamka bayaan ugu muujin lahaa SNM iyo HAG oo iyaga oo muluqsan cidla isa soo taagay.
Libintiisu qaabkaas ayay ugu soo hooyan lahayd oo uu maanta dhayda macaan ka dhami lahaa. Nacas iga dheh.